Binary Search Tree Leetcode Solution - TutorialCup ကိုရှာပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » LeetCode Solutions » Binary Search Tree Leetcode Solution တွင်ရှာပါ
မကြာခဏမေးတယ် Apple IBM က
ဒီပြproblemနာမှာငါတို့ကိုပေးထားတယ် Binary Search Tree နှင့်ကိန်းတစ်ခု။ node တစ်ခု၏တန်ဖိုးကိုပေးထားသောကိန်းနှင့်တူညီသည်။ စစ်ဆေးမှုအနေနှင့်၊ ဤ node သည် root အဖြစ်ရှိသော sub-tree ၏ preorder traversal ကို print ထုတ်ရန်လိုအပ်သည်။ သစ်ပင်၌ပေးထားသောကိန်းနှင့်ထပ်တူတန်ဖိုးမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ပြန်လာရန်လိုသည် nullဆိုလိုသည်မှာအပင်တစ်ပင်မျှမရှိ။
ရှာဖွေမှုများကို Binary Search Tree Leetcode Solution တွင်အသုံးပြုခြင်း
ရှုပ်ထွေးမှုအားရှာဖွေခြင်းအား Binary Search Tree Leetcode Solution တွင်ရှာဖွေခြင်း
BST တွင်တန်ဖိုး3ပါသည့် node တစ်ခုပါရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သစ်ပင်ခွဲများကိုပြန်ပို့ပြီးယင်း၏ကြိုတင်မှာယူမှုဖြတ်သန်းမှုကို print ထုတ်သည်။
BST တွင်တန်ဖိုး ၄ ပါသော node များမပါ ၀ င်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် NULL ကိုပြန်ပို့ပြီး“ Empty BST” ကို print ထုတ်သည်။
ဤကိစ္စတွင်ပြproနာတစ်ခုသည်ပြsubနာတစ်ခုပေါ်တွင်မူတည်သည်ကိုစဉ်းစားကြည့်ကြစို့။ ဆိုကြပါစို့၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ function သည် node လိပ်စာကို target value နှင့် return ပြန်လျှင်ဆိုပါစို့။ သစ်ပင်၏အမြစ်မှကျွန်ုပ်တို့စတင်သည်။ ဒီ node ကိုလျှင် null ကျနော်တို့ binary search tree ရဲ့အဆုံးကိုရောက်ပြီဆိုတာသိသာထင်ရှားပြီး target value နဲ့ node မရှိဘူး။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကပြန်လာ null ။ အလားတူစွာကျွန်ုပ်တို့ node တန်ဖိုးသည် target တန်ဖိုးနှင့်ညီသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ node ကိုပြန်ပို့သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် target-တန်ဖိုး node တစ်ခုခုဖြစ်မယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ် လက်ဝဲဘက် ဇော်ဂျီ မှန်သော လက်ရှိအမြစ်၏ subtree ။ root.value နှင့် target value တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လမ်းကြောင်း (ဘယ်သို့မဟုတ်ညာ) ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအတူတူ recursive function ကိုခေါ်ပါ အမြစ် as root.left or root.right ။
function တစ်ခုဖန်တီးပါ searchBST () ပစ်မှတ်လိပ်စာပြန်လာရန်
If အမြစ် ညီမျှသည် တရားမဝင်သော OR အမြစ် ပစ်မှတ်၏တန်ဖိုးကဲ့သို့တူညီသောတန်ဖိုးရှိ:
root.value ဟာ target value ထက်ကြီးရင်၊
ပြန်လာ searchBST (root.left, val)
ပြန်လာ searchBST (root.right, val)
ပစ်မှတ် node ကို၏ preorder ဖြတ်သန်းပုံနှိပ်ပါ
အို (H) H ကို = logN = ပျမ်းမျှကိစ္စများတွင် BST ၏အမြင့်နှင့် အို (N)၊ အဆိုးဆုံးကိစ္စများတွင် BST ၏အရွယ်အစား။ ကျနော်တို့ BST skewed အတွက်ဖြစ်ပေါ်သောအဆိုးဆုံးကိစ္စများတွင်တစ်ချိန်ကသစ်ပင်ဖြတ်သန်း။
အို (H) ပျမ်းမျှကိစ္စများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် node တိုင်းကိုဖြတ်သန်းရန် recursive ခေါ်ဆိုမှုများကိုအသုံးပြုသည်။ အို (N) အဆိုးဆုံးကိစ္စမှာ။ အရေးကြီးသောမှတ်စုတစ်ခုမှာ compilers အချို့သည် enable လုပ်ရန်ဖြစ်သည် အမြီး - ပြန်သွား နှင့်ထိုကိစ္စများတွင်အာကာသရှုပ်ထွေးဖြစ်လာသည် အို (၁).
အထက်ပါချဉ်းကပ်နည်းနှင့်ဆင်တူသည်မှာလက်ရှိ node တွင်ပစ်မှတ်တန်ဖိုးမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ဝဲသို့မဟုတ်ညာသို့ subtree သို့ခုန်နိုင်သည်။ root = root.left or root = root.right အမြစ်ဖြစ်လာသည်အထိတိုင်းကြားမှာ တရားမဝင် အကယ်၍ root တန်ဖိုးသည်မည်သည့်ကြားမှာမဆို target target နှင့်တူညီကြောင်းတွေ့ရှိပါက၎င်း root ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်ပို့သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကျနော်တို့ပြန်လာ တရားမဝင်
အလားတူ function ကိုဖန်တီးပါ searchBST () ကြောင်းပစ်မှတ် node ကို၏လိပ်စာပြန်လည်ရောက်ရှိ
စဉ် အမြစ် is မဟုတ် တရားမဝင်သော
if root.value ပစ်မှတ်တန်ဖိုးညီမျှသည်
if root.val is သာ. ကြီး ပစ်မှတ်တန်ဖိုးကိုထက်
လက်ျာ subtree သို့ရွှေ့ပါ - root = root.right
ဘယ်ဘက် subtree သို့ရွှေ့ပါ root = root.left
အို (H = logN) ပျမ်းမျှကိစ္စများတွင်နှင့် အို (N) အဆိုးဝါးဆုံးကိစ္စများတွင် (BST ကိုလွဲချော်သွားသည်)၊ အထက်ပါချဉ်းကပ်နည်းနှင့်အတူတူဖြစ်သည်
အို (၁) သာစဉ်ဆက်မပြတ်မှတ်ဉာဏ်အာကာသကိုသုံးပါအဖြစ်။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား LeetCode Solutions Tags: Apple, Binary Search Tree, လွယ်ကူသော, IBM က post navigation
FileReader Java - Java တွင် FileReader ကိုမည်သို့သုံးရမည်၊ Java FileReader ဥပမာများနှင့်အတူ FileReader လူတန်းစားနှင့်နည်းလမ်းများအတွက်မည်သည့်အရာကိုတင်သွင်းမည်နည်း။